» ‘हाम्रो अनुहार आयो, कथा आएन’
१७ मंसिर २०७६, मंगलवार १२:३३
दर्शक, समीक्षकको अपेक्षा थियो– मूलधारको चलचित्रमा दयाहाङ राई (३९) को सफलताले ‘आम अनुहार’ मात्र होइन ‘आम चरित्र’ पनि पाउनेछ, दयाहाङहरूले नै यसको नेतृत्व गर्नेछन् । तर, आठ वर्षयता झण्डै ४० चलचित्रमा काम गरिसकेका अहिलेका व्यस्त अभिनेतामध्येका एक दयाहाङले इमानदार अभिनेताको छाप कायम राखे पनि आम अपेक्षा भने पूरा गर्न सकेनन् । के परिवर्तनको कुरा गर्ने दयाहाङ आफैं परिवर्तन भए ? उनीसँग नुनुता राईले गरेको वार्ताको सारः
पहिले मेरो दिमागमा नाटक नै खेल्छु, निर्देशन गर्छु, लेख्छु भन्ने थियो । सिनेमा चाहिं हदै भए निर्देशनसम्म गर्छु कि भन्ने लाग्थ्यो । नाटक गर्दागर्दै सिनेमाका साथीहरूको पनि ‘सर्कल’ बन्यो । कुरा गर्दागर्दै काम पनि शुरु भयो । अहिले त मलाई एउटा दिन र अर्को रात जस्तो
सिनेमा शुरु गर्दा पनि अब म जस्तो मान्छेको कथा पनि आउने भयो भनेर मक्ख परेको थिएँ । तर त्यस्तो हुन सकेन । पाँच/सात वर्षअघि लुट, कबड्डी कै शैलीमा सिनेमाहरू बने । विश्वबजारमा देखाउन लायक हाइवे, सेतो सूर्य, कालो पोथी, तान्द्रो, बुलबुल जस्ता केही सिनेमा मात्रै बने । त्यस्ता सिनेमा कम्तीमा पनि वर्षको दुई वटा आउनुपथ्र्यो कि !
रङ्गमञ्चका कलाकारहरू चलचित्रमा आउँदा भूमिका छनोटमा कमजोरी देखिन्छ । अधिकांशमा उस्तै चरित्र (टाइपकास्ट) को समस्या पनि छ । यस्तो किन भइरहेको छ ?
समस्या निर्देशक र कलाकारमै रहेछ । तर वेलावेला निर्देशकहरूले दर्शकको चलचित्र चेतनामा प्रश्न गरेको पाइनु कत्तिको उचित हो ?
केही गरी बजारले मलाई फ्याँक्नु भनेको हिजोका मेरो सोच पूरा गर्न समय दिनु हो । भोलि फरक किसिमको बजार निर्माण गर्न पनि सकिएला । “वार्ता” साभार – “हिमाल खबर डट कम” बाट ।
कोदालो प्रहार गरेर ५ जनाको हत्या, हत्याको आशंकामा एक जना पक्राउ
गुल्मीमा क्वारेन्टिनमै आत्माहत्या
रुकुमपश्चिम घटनाको छानविन माग गर्दै हेटौंडामा प्रदर्शन
चौरजहारी घटनाको निष्पक्ष छानबिन होस् – राष्ट्र संघ
अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्ने सरकारको घोषणा
बकैयाबाट चोरीको सामान सहित एक पक्राउ
स्थानिय जनप्रतिनीधिद्वारा रिद्धिसिद्धि सिमेण्टको अनुगमन
जेठ १ गतेबाट हेटौँडामा मोटरसाईकल, अटो चलाउन रोक
एकै दिन ८३ जनामा कोरोना संक्रमण, कुल २१७ पुग्यो